Xiddig muhiim ka ah Manchester City oo ku sii jeeda horyaalka La Liga ee dalka Spain – Gool FM
Xiddig muhiim ka ah Manchester City oo ku sii jeeda horyaalka La Liga ee dalka Spain
(Manchester) 04 Juun 2021. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gudaha dalka Spain mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda Manchester City ayaa waxaa si weyn loo hadal hayaa inuu ku biirayo horyaalka La Lig ee dalka Spain.
Maamulka kooxda reer Spain ee Atletico Madrid ayaa doonaya inay xoojiyaan safka kooxdooda, kuwaas oo isku diyaarinaya inay difaacdaan horyaalnimadooda, xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport” ee dalka Spain kooxda ka dhisan caasimada Spain ayaa dooneysa inay la saxiixato xiddiga reer Portugal iyo kooxda Manchester City ee Bernardo Silva.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan maadaama Jorge Mendes uu yahay wakiilka laacibka, in karto Atletico Madrid ay ka caawin karto ku guuleysiga heshiiska Bernardo Silva, sababa la xiriira xiriirka wanaagsan ee Mendes kala dhexeeya kooxda, kaddib heshiisyadii uu horey ugu suurtogaliyay ee ugu muhiimsanaa midka João Félix.
Silva ayaa Manchester City ku soo biiray sanadkii 2017 isaga oo kaga soo biiray kooxda Monaco, tan iyo markaasna waxa uu ka qayb galay 201 kulan, isaga oo u dhaliyey 35 gool, isla markaana saaxiibadiis ka caawiyey 44 gool kale.
Laacibka reer Portugal ayaa ka qeyb qaatay xilli ciyaareedkii ku dhamaaday in Man City ay ku guuleysato Premier League, 26 kulan ee horyaalka ah, wuxuu dhaliyay 2 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 6 gool kale.
Wuxuu sidoo kale ka qeyb qaatay ololihii City ee finalka Champions League, wuxuu ciyaaray 13 kulan oo tartanka ah, isaga oo dhaliyay 2 gool, sidoo kale wuxuu saaxiibadiis ka caawiyay 2 gool kale.
Muxuu Gary Lineker ka yiri dhaawaca soo gaaray daafaca kooxda Liverpool ee Trent Alexander-Arnold?
Muxuu Luis Enrique ka yiri De Gea kaddib niyadjabkii Villarreal & kahor bilaabashada koobka EURO 2020?